Oniversiten’Antananarivo Hihetsika ny mpianatra manomboka anio
Nanao antso avo teny Ankatso ny zoma teo ny solontenan’ireo mpianatra eny amin’ny oniversiten’Antananarivo fa hisy ny hetsiky ny mpianatra manomboka anio alatsinainy ho fitakiana ny famahan’ny fitondrana ny olana eny amin’ny anjerimanontolo.
Angon-kevitra momba ny fanabeazana Hametraka biraom-paritra ny CONAMEPT
Betsaka ny lesoka momba ny fampianarana eto amintsika. Mitotongana ny fiainan`ny mpampianatra ary lasa kitoatoa ny fampianarana ka manohintohina ny fanabeazana eto amintsika.
Noho izay antony izay indrindra dia betsaka tamin’ireo ray aman-dreny no voatery nidi-trosa. Diso nifanakaiky loatra mantsy ny fotoam-pialantsasatra sy ny fotoana nidiran’ny mpianatra teny anivon’ny tsy miankina noho ny halavan’ny taom-pianarana 2017-2018. Ho an’ny sekoly tsy miankina La Prime etsy Anosibe dia anisan’ny niaina izany tokoa. Tsy afaka nandoa ny saram-pisoratan’anarana niaraka tamin’ny saram-pianarana volana oktobra avy hatrany mantsy ny ankamaroan’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra ao aminy fa nandoa izany tsikelikely. Ny saram-pisoratan’anarana sy ny fitaovan’ny mpianatra aloha no tena novonjen’ireo ray aman-dreny vao nanefa tsikelikely ny saram-pianarana izy ireo. Tena nandefitra ny sekoly, hoy Razanamihaja Harivelo Clarisse, sady niezaka tsy nampiakatra ny vola fandoan’ny ray aman-dreny isan-taona ihany koa. Nomarihiny fa zanaky ny sahirana avokoa ny ankamaroan’ireo mpianatra ao aminy.